Translọ nnyefe Ike, Communiclọ Nkwurịta Okwu - Qiangli
Towerlọ nkwurịta okwu
Towerlọ elu ike
Anyị Nye High Products
Electric n'akuku ígwè ụlọ elu
Electric n'akuku ígwè ụlọ elu Ike ụlọ elu bụ ụdị ígwè Ọdịdị etiti nke na-a ụfọdụ mma anya n'etiti na-akwado eduzi, ala waya na ala ụlọ na nnyefe akara. Site na ihe owuwu ahụ: ụlọ elu igwe n'ozuzu ya, osisi ọkpọkọ ígwè na ígwè tube dị warara. The n'akuku ígwè ụlọ elu na-adịkarị na-eji n'ọhịa, na ígwè anwụrụ poolu na nchara anwụrụ warara isi ụlọ elu na-adịkarị na-eji na obodo mepere emepe n'ihi na ala ebe dị obere karịa ...
Hụ ihe ndị ọzọ>
Electric angle steel tower Electric angle steel tower bụ ụdị ụdị ígwè nke nwere ike idebe ụfọdụ nchebe dị n'etiti ndị na-akwado nkwado na ụlọ ala dị na ntanetị. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, site na uto ngwa ngwa nke akụ na ụba mba, ụlọ ọrụ ike amalitela n'ike n'ike, nke na-akwalite mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ụlọ elu nnyefe ọkụ. Dabere na ọnụ ọgụgụ, ahịa revenue nke nnyefe akara ụlọ elu ụlọ ọrụ na China mụbara site 5 bil ...
Electric n'akuku ígwè ụlọ elu n'akuku ígwè ụlọ elu bụ a efere kọlụm na downcomer. Mpaghara na-afụ ụfụfụ bụ nke mejupụtara nchara nchara n'ụzọ kwekọrọ na ibe ya, ntuziaka ndokwa nke nchara nchara kwekọrọ na ntụziaka nke mmiri mmiri. Ihe nkuku di nkuku nke nkuku igwe di na akuku ala, ma obe ya di na udi nke "V". E nwere ihe ụfọdụ okporo oghere dị n'akụkụ akụkụ abụọ dị n'akụkụ. The downcomer bụ otu ihe ahụ dị ka ndị nkịtị tree. Liquid nke elu pl ...
Electric angle steel tower Electric angle steel tower bụ ụdị ụdị ígwè nke nwere ike idebe ụfọdụ nchebe dị n'etiti ndị na-akwado nkwado na ụlọ ala dị na ntanetị. N'afọ ndị 1980, ọtụtụ mba n'ụwa malitere itinye profaịlụ nchara ígwè na ụlọ elu mgbe ị na-emepe usoro ntinye UHV. Tubelọ elu ígwè nchara nwere ọkpọkọ ígwè dị ka isi ihe pụtara. Na Japan, a na-ejikarị ụlọ elu igwe na-arụ ọrụ na 1000kV UHV na ụlọ elu. Ha ...
Qingdao Qiangli Steel Structure Co. Ltd, dị na 1998, na-etinye aka na ụdị ụdị ígwè ọ bụla a na-eji ígwè arụ, imepụta, na ntinye, nke na-enye ndị ahịa otu nkwụsị maka nnukwu ụlọ ọrụ ọkachamara. Anyị bụ ndị ruru eru dị ka Qingdao High Technology Enterprise na Vice President Enterprise of Jiaozhou Steel Structure Association.
Housingkwaga ụlọ obibi na-ebibi ebibi bụ otu n'ime ọrụ nyocha nke ebe obibi ígwè
Owuwu ulo ihe owuwu ulo bu ime ulo oru ime obodo, oge di nkenke, ulo oru di elu, nchekwa ike, ntughari, wdg., Kwekorita echiche mmepe nke mba na iwu nke ndu ndi mmadu. “Ime obodo dilapi ...
Hebei mbụ green ígwè Ọdịdị nzukọ obodo bụ ihe na-amalite na-ewu na Shijiazhuang
Jenụwarị 13, “Gọọmentị Gọọmentị nke Mpaghara Hebei na mmezu nke mmepe nke ụdị ụlọ nzukọ na mmejuputa echiche nke” nnwepụta gọọmentị, iji jiri ike mee ngwa ngwa nke nzukọ na mmepe Hebei. Zhuo Da Group ọnụ ...
Chongqing Steel Structure Industry Co., Ltd. biri na anyị district
Ndị nta akụkọ ụnyaahụ sitere na kọmitii na-ahụ maka njikwa Jiangbei ka a gwara na Chongqing Steel Industry Co., Ltd. gara biri na nso nso Jiangbei ọnụ ego obodo Nke 3 T3, na-akara akara Jiangbei ọnụ ụlọ ọrụ iji meziwanye. Chongqing Steel Structure Industry Co., Ltd. e guzobere ...
Bengbu Olympic Sports Center nke eji egwuru ugo na-ewu ụlọ nke ihe eji egwu egwu izizi iji wuchaa ya
Dabere na Bengbu News kọrọ na ụtụtụ nke February 28, Bengbu Olympic Sports Center bụ isi ama egwuregwu, mita 45 n'ogologo, na-atụle 60 tọn nke nkwonkwo ígwè na-eji nwayọọ na-ebuli kreenu ụlọ elu ahụ, ma tinyezie ya karịa 20 mita. n'elu kọlụm nchara, ...
Gymnasium nke mpaghara ejiriwo isi nke ámá egwuregwu ahụ na ígwè
Lanzhou Morning News (Reporter Lu Weishan) Ndị odeakụkọ na February 23 emere na nnọkọ egwuregwu nke ọgbakọ a gwara na afọ gara aga mpaghara na mpaghara nke ahụike mba enweela nnukwu ọganihu, mpaghara ahụ nwere ngụkọta nke agbụrụ 68, mụbaa ama egwuregwu ahụ n'efu imeghe mgbalị ...
Jiaozhou City, Shandong Province, Jiaozhou Industrial Park Road na 1st ike ụzọ
Electric n'akuku Steel Tower, Towerlọ Nkwurịta Okwu Obodo, N'akuku Steel Power Nzipu Tower, Electric Angle Steel Towers, Ihe owuwu Prefab, Ọkpụkpụ Steel,